UyiPhuhlisa Njani iWebhusayithi, i-Ecommerce, okanye iSikimu soMbala weSicelo | Martech Zone
UyiPhuhlisa Njani iWebhusayithi, i-Ecommerce, okanye iSkimu soMbala weSicelo
NgoLwesithathu, uDisemba 15, 2021 NgoLwesithathu, uDisemba 15, 2021 Douglas Karr
Sabelane ngamanqaku ambalwa ngokubaluleka kombala ngokubhekiselele kwibhrendi. Kwiwebhusayithi, indawo ye-ecommerce, okanye iselula okanye isicelo sewebhu, ibaluleke kakhulu. Imibala inefuthe kwi:
Umbono wokuqala we-brand kunye nexabiso layo - umzekelo, iimpahla zodidi zihlala zisebenzisa umnyama, obomvu kuthetha uchulumanco, njl.
Izigqibo zokuthenga - ukuthembela kwe-brand kunokumiselwa ngumahluko wombala. Izikimu zemibala ethambileyo zinokuba ngabasetyhini ngakumbi kwaye zithembeke, ukuchasana okuqatha kunokukhawuleza kwaye kuqhutywe isaphulelo.
Ukusebenziseka kunye namava omsebenzisi- imibala abe ngokwasengqondweni kunye neempembelelo zefiziyoloji ngokunjalo, ikwenza kube lula okanye kube nzima ukuzula kujongano lomsebenzisi.
Ubaluleke Kangakanani Umbala?
I-85% yabantu ithi umbala unempembelelo enkulu kwizinto abazithengayo.
Imibala ikhulisa ukuqondwa kwebrendi ngomyinge wama-80%.
Ukubonakala kombala kuxanduva lwe-60% yokwamkelwa okanye ukugatywa kwemveliso.
Xa umisela iskimu sombala wewebhusayithi, kukho amanyathelo achaziweyo kwi-infographic ehamba nayo:
Umbala wokuqala -Khetha umbala ohambelana namandla emveliso okanye inkonzo yakho.
Imibala yesenzo -Oku kulahlekile kwi-infographic engezantsi, kodwa ukuchonga umbala wesenzo sokuqala kunye nombala wesenzo sesibini kuluncedo kakhulu. Ifundisa abaphulaphuli bakho ukuba bagxile kwizinto ezithile zojongano lomsebenzisi ezisekwe kumbala.
AImibala eyongezelelweyo -Chonga ezongezelelweyo imibala ehambelanayo umbala wakho ophambili, ngokufanelekileyo imibala eyenza umbala wakho ophambili Pop.
Imibala yangasemva -Khetha umbala wemvelaphi yewebhusayithi yakho-unokuthi ubenobundlongondlongo kunombala wakho ophambili. Gcina kwimowudi emnyama kunye nokukhanya engqondweni ngokunjalo.
Imibala Yokuchwetheza -Khetha umbala wesicatshulwa oza kuba kwiwebhusayithi yakho - khumbula ukuba uhlobo olumnyama oluqinileyo lunqabile kwaye alukhuthazwa.
Ngokomzekelo, inkampani yam Highbridge uphuhlise uphawu lwe-intanethi lomenzi wempahla owayefuna ukwakha indawo yokuthengisa ngokuthe ngqo kumthengi apho abantu babenako thenga iilokhwe kwi-intanethi. Saqonda abaphulaphuli bethu, ixabiso lophawu, kwaye - ngenxa yokuba uphawu lwaluyidijithali ubukhulu becala kodwa lwalunemveliso ebonakalayo - sigxile kuyilo lwemibala olusebenze kakuhle kushicilelo (CMYK), iipeyile zelaphu (Pantone), ngokunjalo idijithali (RGB kunye neHex).
Ukuvavanya iSkimu soMbala ngoPhando lweMarike
Inkqubo yethu yokukhethwa kweskimu sombala yayinzulu.
Senze uphando lwentengiso kuthotho lwemibala ephambili kunye nabaphulaphuli esijolise kubo abasihlisele kumbala omnye.
Senze uphando lwentengiso kuthotho lwemibala yesibini kunye neyesithathu kunye nabaphulaphuli esijolise kubo apho siye sacutha ezinye izikimu zemibala.
Senze ii-mockups zemveliso (ukupakishwa kwemveliso, iithegi zentamo, kunye neethegi zokuxhoma) kunye nee-mockups ze-ecommerce kunye nezicwangciso zemibala kunye nokubonelela abo kumxhasi kunye nabaphulaphuli ekujoliswe kubo ngempendulo.
Ngenxa yokuba uphawu lwabo lwaluxhomekeke kakhulu kwixesha lonyaka, siye safaka imibala yexesha elithile kumxube. Oku kunokuba luncedo kwingqokelela ethile okanye iziboniso zeentengiso kunye nezabelo zemidiya yoluntu.
Sihambe kule nkqubo izihlandlo ezingaphezu kwesiqingatha seshumi elinambini ngaphambi kokuba sizinze kwisikimu sokugqibela.
Ngelixa imibala yebhrendi ipinki ekhanyayo kwaye ingwevu emnyama, siphuhlise imibala isenzo ukuba ngumthunzi oluhlaza. Umbala oluhlaza ngumbala ojolise kwisenzo ngoko ibilukhetho oluhle ukutsala amehlo abasebenzisi bethu kwizinto ezijolise kwintshukumo. Sifake inverse eluhlaza kwizenzo zethu zesibini (umda oluhlaza kunye nemvelaphi emhlophe kunye nesicatshulwa). Sikwavavanya umthunzi omnyama wohlaza kumbala wentshukumo yeentshukumo ze-hover.
Ukusukela oko sisandula ukuzisa indawo, sifake umkhondo wokukhangela impuku kunye neemephu zobushushu ukujonga izinto ezitsalwa ziindwendwe zethu kwaye zinxibelelane noninzi ukuqinisekisa ukuba sinombala weskimu esingabonakalisi kakuhle… sisebenza kakuhle.
Imibala, iSithuba esiMhlophe, kunye neempawu zeempawu
Ukuphuhlisa iskimu sombala kufuneka sisoloko sifezekiswa ngokusivavanya kujongano lomsebenzisi ngokubanzi ukujonga ukusebenzisana kwabasebenzisi. Kwindawo engentla, sidibanise imida ethile, i-padding, amagqabantshintshi, iirediyasi zemida, i-iconography, kunye nohlobo lokubhala.
Sihambise isikhokelo esipheleleyo sophawu ukuze inkampani isasaze ngaphakathi kuyo nayiphi na into yokuthengisa okanye imveliso. Ukungaguquguquki kwebhrendi kubalulekile kule nkampani kuba batsha kwaye abanalwazi kushishino okwangoku.
Nantsi iSiphumo seSiza se-Ecommerce esineSikimu soMbala
Closet52 Iphepha lasekhaya
Iphepha leeNgqokelela zeCloset52
Iphepha leMveliso ye-Closet52
UkuSetyenziswa koMbala kunye nokuFameka koMbala
Ungalibali uvavanyo lokusebenziseka lomahluko wombala kuzo zonke izinto zesayithi yakho. Ungavavanya inkqubo yakho usebenzisa i Isixhobo soVavanyo lokuFikelela kwiWebhusayithi. Ngeskimu sethu sombala, siyazi ukuba sinemiba ethile yokuchasana esiza kusebenza ngayo ezantsi kwendlela, okanye sinokuba neenketho ezithile kubasebenzisi bethu. Okubangela umdla kukuba, amathuba emicimbi yemibala kubaphulaphuli esijolise kubo asezantsi kakhulu.
Ubumfama bemibala kukungakwazi ukubona umahluko phakathi kweminye yemibala enokuthi ihlulwe ngabasebenzisi abangenamibala. Ubumfama bombala buchaphazela malunga ezintlanu ukuya kwisibhozo ekhulwini amadoda (malunga ne-10.5 yezigidi) kwaye ngaphantsi kwepesenti enye yabasetyhini.
Iqela kwi-WebsiteBuilderExpert lidibanise le infographic kunye nenqaku elihamba kunye neenkcukacha Ungawukhetha njani umbala kwiWebhusayithi yakho oko kucokiseke kakhulu.
tags: imibala isenzoimibala yangasemvaimibala yophawubiza umbala wesenzokwigumbi lokulala52umbalascheme umbalaizikimu zemibalaumbala we-ecommerceiskimu sombala we-ecommerceindlela yokuvavanya imibalauphando lwemakethiiskimu sombala weapp yeselulaimibala ephambiliimibala yesibinikhetha imibalaimibala ephezuluukuvavanya iskimu sombalauvavanyo lwemibala yemibalaimibala yohlobouyilo lomsebenzisikuyilo webkwiwebhusayithi
Sellfy: Yakha i-Ecommerce yakho yeeMveliso zokuthengisa okanye uBhaliso kwiMizuzu
Shopify: Indlela yokuCwangcisa izihloko zomxholo weDynamic kunye neeNkcazo zeMeta ze-SEO usebenzisa i-Liquid